Kukho ubuchule kunye neqhinga lokuqwalasela
Njengoko usondela kwiminyaka yobudala engama-65, uya kuqala ukufumana ezininzi iintengiso kwi-imeyile ye "Medicare Benevantage" izicwangciso ezivela kubanikezeli bentengiso yabarhweba abafana ne-HMOs. Ezi zicwangciso zinikela kwaye ngaba ngokwenene zikunike "inzuzo?"
Izicwangciso ze-Medicare Benevantage-ngamanye amaxesha zibizwa ngokuba yi "Medicare Part C" -njani uhlobo lwe-inshorensi yempilo enikwe iinkampani ezizimeleyo ezenza isivumelwano kunye neprogram yolawulo lwe-Medicare karhulumente ukubonelela bonke abathathi-nxaxheba be-Medicare kunye neenkonzo kunye neenzuzo ezibonelelwe phantsi kwe-Medicare Part A (Inpatient / Isibonelelo seBhedlele) kunye neCandelo B (IsiGulane / ukuThengiswa kwezoNyango) "weMpilo yoTywala." Ukongezelela kuzo zonke iinkonzo ezigqitywe phantsi kweMpilo yeMveli, ii-Medicare Advantage Plans nazo ziquka ukukhutshwa kwezidakamizwa.
Izicwangciso zeMedare Benevantage zibonelelwa ngeMibutho yeZondlo zeMpilo (ii-HMOs), iiNkxaso zeMveliso eziPhezulu (iiPPOs), iiNkqubo zeeNkonzo eziziThile, iziCwangciso zeeMfuno eziZodwa kunye neMicandelo le-Akhawunti yeMali yokuThengiswa kweMpilo.
Ukongezelela kuzo zonke iinkonzo ezigqitywe phantsi kweMveli ye-Original Medicine, ezininzi zeMicrosoft Advantage Plans zibonelela ngemichiza yokuchithwa kwezidakamizwa.
Ngokomyinge, malunga ne-30% yazo zonke izigidi ezingama-55.5 ze-Medicare abathathi-nxaxheba bakhetha izicwangciso ze-Medicare Benevantage.
Kwinqanaba elongezelelweyo, izicwangciso ze-Medicare Benevantage zinikezela abathathi-nxaxheba lula, ukukhuselwa kwemali kunye neenkonzo ezingaphezulu.
Iziganeko zomntu wonke: Iiplani ezininzi ze-Medicare Benevantage zibonelela ngeendleko zonyango ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo, xa kuthelekiswa neMedare yeMveli, apho abathathi-nxaxheba kufuneka bathenge isicwangciso seziyobisi ezihlukeneyo (Medicare Part D) kwi-premium eyongezelelweyo ukusuka kwi-10 ukuya kwii-100 ngenyanga .
Iindleko ezingaphantsi kwee-pocket: Iindleko ezipheleleyo eziphuma ngaphandle kweenkonzo ezikhuselekileyo zifakwe kwiiplani ze-Medicare Benevantage-kwaye emva kokuba kufakwe i-cap yonyaka, icebo lihlawulela inani elipheleleyo elivumelekileyo leenkonzo zakho zonyango. Ngaphezu koko, ngokujoyina isicwangciso seMedare Benevantage, ungagcina imali ngokushiya "iMigigap" ukuba unayo isicwangciso-inshorensi esongezelelekileyo esithintela iindleko ezifana neentlawulo zentsebenziswano okanye ukunakekelwa ngaphandle kwe-United States. Ezinye izicwangciso ze-Medicare Benevantage nazo zinceda abancedisi bahlawule i-premium ye-Medicare ngenyanga.
Izibonelelo ezongezelelweyo: Izicwangciso ze-Medicare Benevantage zibonelela ngezibonelelo ezingakhange zifakwe kwiMedare yeMveli, njengamazinyo, ukuva, kunye nokunyamekelwa kombono. Ezinye iiplani zize zinikeze ubulungu bokuzivocavoca.
Ngokuxhomekeke kwisicwangciso esithile, izicwangciso ze-Medicare Benevantage zinokuthi zibe neengxenye ezingenakubhenela abachaphazelekayo.
Ukukhetha okuncinci kwababoneleli: Abantu abakwizicwangciso ze-Medicare Benevantage ngokubanzi kufuneka bakhethe oogqirha kunye nezibhedlele kwiinkonzo ezithile zabasebenzi-kunye neenkonzo zangaphandle zingabiza. Nangona kunjalo, uphando lubonise ukuba ulwazi malunga neenkonzo zonxibelelwano lunokutshintsha rhoqo, ukwenza kube nzima ukwazi ukuba ngubani kwinethiwekhi. Uninzi lwabaxhasi beeMpilo zeeMpilo zeeMeyile zihlaziywe uluhlu lwezonyango zonyango kunye neendawo ezibandakanyiweyo kwinethiwekhi yabo. Ngelixa i-Centeral federal kwi-Medicare Services (i-CMS) ngoku ifuna i-Medicare Benevantage icebo ukwazisa abathathi-nxaxheba nanini xa benciphisa kakhulu ubukhulu bomnatha wabo wesevisi, umyalelo uvumela abacwangcisi beprogram ngokwabo ukuba bachaze "ezibalulekileyo."
Ukulungelelaniswa okukodwa: Iiprogram ze-Advantage izicwangciso zivumela ithuba leenyanga ezili-6 apho abathathi-nxaxheba abatsha banokusilahla isicwangciso baze babuyele kwiMedare. Emva kwenyanga-6, abathathi-nxaxheba banokutshintshwa kuphela emva kwexesha ngethuba lokubhalisa elivulekileyo le-Medicare ukusuka ngo-Oktobha 15 ukuya kuDisemba 7.
I-premium eyongezelelweyo: Ezinye izicwangciso ze-Medicare Benevantage zifuna ukuba abathathi-nxaxheba bahlawule i-premium yenyanga nganye ngaphandle kwe-premium yabo ye-Medicare.
Ukuba ufanelekile kwi-Medicare okanye sele uvele kwi-Medicare yendabuko kwaye uqwalasela inketho ye-Medicare Benevantage, kufuneka uhlolisise ngokucophelela iinkonzo kunye neengxaki ze-Medicare zemveli kunye nezicwangciso ezahlukeneyo ze-Medicare Benevantage ezikhoyo kuwe.
Amathuba akhoyo amacebo amaninzi e-Medicare Benevantage anikezelwe kwingingqi yakho, ngalinye lijongene neendleko ezahlukeneyo, iinzuzo kunye nomgangatho. Uninzi lwababoneleli beeNkonzo ze-Medicare bafumana iiwebhusayithi ngolwazi olupheleleyo kunye nenombolo yomnxeba. Abaninzi banokuvumela ukuba ubhalise kwi-Intanethi.
Ukufumana izicwangciso ze-Medicare Advantage ezifumaneka kwindawo yakho, ungasebenzisa i-CMS ye-Medicare Plan Finder.
I-Medicare nayo enye inikezela ngezixhobo zokukunceda ukuba wenze isigqibo, njenge-Handbook ye-Medicare & Wena, kunye nolwahlulo lwe-inshorensi yezempilo karhulumente ungaqhagamshelana ukuze ufunde kabanzi. Unokubiza no-Medicare ngqo kwi-1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).
Ukuba uthatha isigqibo sokuba ubhalise kwisicwangciso se-Medicare Benevantage plan:
Ukutyelela iwebhsayithi yeziko lokubona ukuba unako ukubhalisa kwi-intanethi; okanye
Gcwalisa ifom yokubhalisa iphepha. Qhagamshelana nesicwangciso sokufumana ifom yobhaliso, uyigcwalise, kwaye uyibuyisele kwisicwangciso. Zonke izicwangciso kufuneka zinike le ndlela.
Xa ujoyina iSicwangciso soNcedo lweMithi, uza kufuneka unike inombolo yakho ye-Medicare kunye nomhla oyiNgxenye A kunye / okanye iqela leNgxenye B eqalisiweyo. Le ngcaciso ikukhadi lakho leMedare. Ukuba ulahlekelwe kwikhadi lakho le-Medicare, unokucela ukutshintshwa .
Qaphela uBhoba lobuLwazi
Khumbula ukuba inombolo yakho ye-Medicare iqulethe iNombolo yoKhuseleko lweNtlalo, okwenza ube ngumvuzo ocebileyo wezazisi. Ngoko, ungalokothi unike okanye naluphi na ulwazi oluthile kwi-Medicare plan callers.
Ngaphandle kokuba ucelwe ngokuthe ngqo ukuba uqhagamshelane nefowuni, izicwangciso ze-Medicare Benevantage azivunyelwe ukukubiza. Kwakhona, izicwangciso ze-Medicare Benevantage akufuneki zicele ulwazi lwakho lwezezimali, kubandakanywa nekhadi lesikweletu okanye iinombolo ze-akhawunti yebhanki, phezu kwefowuni.
Ukuba isicwangciso seMicrosoft Benefitage sinokubiza ngaphandle kwemvume yakho okanye siya ekhaya lakho ngaphandle kokumenywa, fowuna u-1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) ukunika isicwangciso kwiCMS.
I-MCAT eNgenakulungelelaniswayo ye-Not-So-Rich
Igama lesiGrike (WG)
Izimfa zeAlexandro Omkhulu: iMfazwe yaseChaeronea
Iingcamango zesiLwimi zesiJamani - i-denken (ukucinga) - Ixesha elidlulileyo
Uvavanyo kunye nokuphunyezwa kukaMary Surratt - 1865
Iingxoxo ezivulekileyo kunye neeFillers ngesiJapane